Nitondra fampiofanana ho an’ny Didec Toamasina ny Cnaps
Ny antsasa-manilan'ireo diosezin'ny Fiangonana katolika no efa nisitraka ny fampiofanana avy amin'ny Cnaps. Ka Didec (Direction diocésaine de l'éducation catholique) 13 no efa nahavita ny fiofanana momba ny fiahiana ara-tsosialin'ny mpiasa. Ny diosezin'i Toamasina no diosezy faha -14. Andinidininy.
Ny Famindram-po no sitrako, fatsy ny sorona !
Teo ampranana ny fivoriana fanaony dia nandefa hafatra ho an'ny kristianina katolika sy ny olona tsara sitra-po ny Fivondronamben'ny Eveka.